NDI OJI EGBE AGA, AWAKPOLA MAHADM NDI KATỌLIK MA TỌRỌKWA OTU ỤKỌCHUKWU – hoo!haa!!
NDI OJI EGBE AGA, AWAKPOLA MAHADM NDI KATỌLIK MA TỌRỌKWA OTU ỤKỌCHUKWU
Ebe ana-ebe akwa na agwọ tagburu mmadụ, ngwere na-apịkwa eze ya n’ike n’ike.
Ka aka na-ebe akwa ndi ụkọchukwu abụọ ndi oji egbe aga gbagburu n’isi nsoa na steeti Benue, ndi amakekwu ji egbe, awakpokwala ụlọ akwụkwọ ndi ụka katọlik bụ mahadum Karitas dị na Bwari Abụja.
Ndi oji egbe aga a, tọkwara otu ụkọchukwu bụ onye nkuzi di elu na yabụ mahadum. Ụkọchukwua bụkwa onye enyem aka nke onwe onye isi mahadum a bụ Michael Kwanashie.
Anyị nụrụ na ndi ikea batara n’ụlọ akwụkwọa n’ihe dika elekere iri na abụọ nke ndeeri ma malite gbaliwe egbe elu aghara aghara. Ka ha mechara nkea, ha gara n’ebe ụkọchukwua ji mere ebe obibi nke dị na ncherịta ihu yabụ mahadum ma tọrọ ya gawara onwe ha.
Ụkọchukwu nkuzia atọrọ nakwa ụkọchukwu ọzọ aha ya bụ Rev. Fr. Aloysius Achọnwa bi n’otu ime ụlọ ahụ. Akụkọa na-ekwu, na mgbe ndi oji egbea batara, na Rev. Fr. Achọnwa bụkwa onye ji ọkwa ọrụ okwukwe mahaduma (chaplain), jiri nwayọọ rikpue n’uko ụlọ ahụ, ma gbanarị ndi ntọrịa.
Mgbe ọ gwara ndi nta akụkọ okwu, otu nwata akwụkwọ kọwara onwe ya dịka Mbafan sịrị na mgbe ha bidoro lụwa ụda egbe n’ime ndeeri, onye ọbụla gbazere dịka mmanụ edodebere n’ọkụ. Nwa nwanyịa sịrị na ọbụ mgbe chi foro ka ha nụrụ na ndi ikea tọrọ ụkọchukwua ma kwue ka-enye ha nde naira iri na ise tupu ha ahapụ ya.
Onye isi ụlọ akwụkwọa bụ ọka mmụta Kwanashie ekwebeghị ekwu ihe ọbụla maka ihe mere. Ọ sị na enyere ya ndụmọdụ ka ya ekwukwana ihe ọbụla maka ihi ọdị mma na nchekwa.
Ọnụ na-ekwuru ndi uwe ojii n’Abuja bụ Anjuguri Manzah ekwuela na akụkọa bụ ihe mere eme mana okwere nkwa na ya ga-esi n’aka ndi uwe ojii ngalaba nke Bwari mara ka ya bụ mmiri siri baa n’opi ụgbọgọrọ.
Previous Post: LEKWA M, LEKWA MKPIRISI AKA M, LEKWA DI M ỌMA!
Next Post: Akwa(EGG)(CLOTH) (CRY)
Aru n’emekwa n’ala